कति समयमा बन्ला बुटवल मेडिकल कलेज ? | Mechikali Daily
कति समयमा बन्ला बुटवल मेडिकल कलेज ?
Posted By: adminon: March 22, 2019 In: breaking, slideshow, बिषेश, राजनीति, समाचार, स्वास्थ्य
बुटवल । चार बर्ष भित्र निर्माणकार्य सम्पन्न हुने गरि ८ बर्ष अगाडी सुरु भएको थियो–बुटवल बेलहिया व्यापारिक मार्ग विस्तार अर्थात् ‘सिक्सलेन’ सडक । २०६७÷६८ सालमा सुरुभएको व्यापरीक मार्ग विस्तार आयोजनाको ८ बर्ष वितिसक्दा समेत निर्माणाधिन अवस्थामा नै छ । त्यसरी नै सुरु भएको अर्को महत्वकांक्षि आयोजना हो– मोतीपुर औद्योगिक कोरीडोर । आयोजनाका अनुसार प्रदेश नं ५ को औद्योगिक कोषेढुँगो मानिएको मोतीपुर औद्योगिक कोरीडोरको ३ बर्ष अगाडी नै भौतिक पुर्वाधारु निर्माण कार्य सुरु हुनुपर्ने हो । तर, अझैं सम्म पनि ईआईए हुन सकेको छैन । भैरहवामा निर्माणाधिन गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल अर्को नैराश्य उदाहरण हो, निर्माणकार्य ढीलाईको । तिन बर्षमा सक्ने योजना बनाईएपनि ५ बर्ष वितिसक्दा समेत विमानस्थल संचालनमा आउन सकेको छैन । यसैबिच फेरी अर्को महत्वकांक्षी योजनाकोे निर्माण प्रक्रीया अगाडी बढेको छ । सरकारले ल्याएको ‘एक प्रदेश एक मेडीकल कलेज’को अवधारणा अनुरुप प्रदेशमा बुटवल मेडीकल कलेजको निर्माणकार्य सुरु भएको छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिका स्थित नयाँमिलमा बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालयको प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेसंगै बुटवलमा अर्को ठूलो आयोजनाको निर्माणकार्य औपचारिकरुपमा सुरुभएको हो । यो संगै फेरी एक पटक बुटवलबासीमा उत्साह छाएको छ ।
कार्यालय स्थापनासँगै सरकारी मेडिकल कलेज बन्ने भएपछि स्थानीय बासिन्दा खुसी भएका तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो । ‘आयोजनाको कार्यालय स्थापनाले प्रदेशमा सरकारीस्तरको मेडीकल कलेज बन्ने बलियो आसा जगाएको छ । हामी नगरबासीमात्र होइन, समग्र प्रदेशवासी खुशी भएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै रुपन्देही उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गणेश अधिकारीले मेडीकल कलेजको निर्माण प्रारम्भहुनुले उद्योगिहरुलाई उत्साहित बनाएको बताउनुभयो ।
समयमै पुरा हुन नसकेका यस्ता आयोजनाहरुका बिचमा सरकारी मेडीकल कलेजको निर्माणकार्य अगाडी बढेको छ । यद्यपी, यस क्षेत्रमा तोकिएको समयमा कुनै पनि आयोजनाले समयमै मुर्तरुप लिन नसकेका कारण समयमै मेडीकल कलेजको निर्माणसम्पन्न हुनेमा विश्वस्त भने हुन नसकीने सरोकारवालाहरुले बताउँछन् ।
किन सकिँदैनन् समयमै आयोजनाहरु ?
रुपन्देही जिल्लामा बिकासक्रममा रहेको केही ठूला आयोजनाकका प्रमुखहरुले आयोजनाको बिकासक्रममा आईपर्ने सम्भावित चुनौतीहरुलाई वेवास्ता गरी हचुवाका भरमा समयसीमा तोकिदिने प्रवृतीले समयमै आयोजनाहरुले मुर्तरुप नसकेको बताउछन् ।
बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका प्रमुख जीवेन्द्र मिश्रले सस्तो लोकप्रीयताकालागि छोटो समयसीमा तोक्ने प्रवृती बन्द गरेर आयोजनाको निर्माणका क्रममा आउने चुनौतीहरुको गहन पुर्वअध्ययनगरेर मात्र समयसिमा तोकिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
निर्माणाधिन बुटवल–बेलहिया सडकको उदाहरण दिंदै उहाँले भननुभयो ‘सडक विस्तारमा ४ बर्षको समयसीमा तोकिएको भएपनि निर्माण कार्य नै दुई फेजमा भएको थियो भने समयमा निर्माण सामग्रीको उपलब्धता नहुनु अर्को मुख्य चुनौती थियो ।’
आयोजनाको ठोस् अध्ययन नै नगरि ४ बर्षमात्र समयसिमा तोकिएको बताउँदै आयोजना प्रमुख मिश्रले भननुभयो,‘बजेट तथा प्रक्रियागत र कानुनगत अड्चनको प्रभावकारी रुपमा पुर्वमुल्याङ्कन हुन नसक्नु अर्को चुनौती थियो ।’ उहाँका अनुसार यी सबै चुनौतीहरुको पुर्वावधान अपनाएर मात्र निर्माण प्रक्रीया सुरु गरिएको भए ‘सिक्सलेन’को निर्माणकार्य समयमा नै सकिन्थ्यो ।
यता तिलोत्तमामा बन्ने भनिएको बुटवल मेडीकल कलेजको निर्माणकार्य सम्पन्न हुँदासम्म कम्तीमा ५ बर्षलाग्ने बताईएको छ । बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाका उपसचिव मानबहादुर घिमिरेले जग्गाको भोगाधिकार, गुरुयोजना, डिपिआरजस्ता महत्वपुर्ण कामहरु सकिएपछि भौतिक पुर्वाधार निर्माणको कार्य सुरुहुने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बुटवल सिक्सलेन र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा जस्तो आयोजनाको विकासक्रममा धेरै चुनौतीहरुको सामना भने गर्नुपर्ने देखिन्न । ‘प्रधानमन्त्रीकै चासोको विषय भएकाले पनि यो प्रथामिकतामा परेको छ जस्तो लाग्छ मलाई ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
सुरुवातीताका मेडीकल कलेजको निर्माण प्रक्रियाका धेरैजसो कामहरु कानुनी प्रकृयामा केन्द्रीत हुने उपसचिव मानबहादुर घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आयोजना जग्गाको भोकाधिकार ग्रहणगर्ने प्रक्रीयामा छ । तिलोत्तमा–१ र ८मा शंकरनगर र करहिया सामुदायिक वनले दुई सय बिघा जग्गा मेडिकल कलेजलाई दिने निर्णय गरिसकेका छन् ।
त्यसपश्चात आयोजनाले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि ईआईएसंगै गुरुयोजना बनाउने छ । गुरुयोजनाले अन्तीम रुप लिएपछिमात्रै वीस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) बनाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सबै काम समयमै हुनसके ७ महिना भित्रै डिपिआर तैयार हुने उपसचिव घिमिरेले बताउनुभयो । त्यसपछिमात्रै भौतिक पुर्वाधारका कामहरु अगाडी बढ्नेछन् ।
ठूला आयोजनाविद्हरुका अनुसार सबै कुरा अनुकुल भएमा अनुमान गरिएको ५ बर्षभित्र मेडीकल कलेजको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन संभवप्राय छ । तर, आयोजनाको विकासक्रममा प्रतिकुलता आएमा यो आयोजनापनि बुटवल बेलहिया सिक्सलेन नहोला भन्न नसकिने उनिहरुको ठम्याई छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजको रुपमा स्थापना हुन लागेको यस मेडीकलकलेजको निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदा सम्म करिब १० अर्ब खर्च हुने पूर्वानुमान गरिएको छ । डीपीपआर लगत्तै २ सय बिघा जग्गामा तत्काल २ वटा ठूला भवन बन्ने छन् । वन क्षेत्र भएकाले ठूला रुख नकाटी तिनलाई पार्क र बगैंचाका रुपमा व्यवस्थित गर्दै अस्पताल संचालन गरिने छ । अहिले प्रावधानमा तिनबर्ष सम्म तिनसय शैया अस्पताल संचालन गरेपछिमात्रै मेडीकल कलेजको रुपमा विकास गर्न सकिने भनिएको छ ।